WARBIXIN: Saddexii Xiddig Ee Ugu Fiicnaa Horyaalka La Liga Xilli Ciyaareedkii 2018/2019 – Wararka Ciyaaraha Maanta
WARBIXIN: Saddexii Xiddig Ee Ugu Fiicnaa Horyaalka La Liga Xilli Ciyaareedkii 2018/2019
June 9, 2019 kooxda La Liga, Wararka Maanta 0
Horyaalka La Liga ayaa dhamaaday bishii hore waxana soo afjaray xilli ciyaareed aad u xiiso leh oo ay kooxda Barcelona si cad ugu guulaystay horyaalka markii 2-aad oo xiriir ah.
Waxa xilli ciyaareedka ka soo qayb qaatay xiddigo aad u badan kuwaas oo qaarkood soo bandhigeen qaab ciyaareed cajiib ah halka qaar kale gabi ahaan soo bandhigeen qaab ciyaareed liita.
Hadaba wargayska Football-Espana ayaa soo saaray 3-dii xiddig ee ugu qaab ciyaareedka fiicnaa horyaalka La Liga xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
Xiddiga reer Argentine ayaa dhaliyay 33 gool isaga oo 12 gool oo cadaan ah ka horeeya xiddiga ugu soo dhaw si raaxo lehna ugu guulaystay gool dhalinta horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan xilli uu mar kale soo qaatay xilli ciyaareedkiisii ugu fiicnaa ee kooxda Barcelona.
Weeraryahankan ayaa shaki la,aan sabab u ahaa ama fure ka ahaa xilli ciyaareedkii cajiibka ahaa ee ay soo qaatay kooxda Getafe kuwaas oo si aad ah ugu dhawaaday in ay u soo baxaan champions League xilli ciyaareedka dambe isaga oo dhaliyay 14 gool waliba qaab ciyaareedkiisa ku mutaystay in looga yeedho xulka qarankiisa Spain.
Waa xiddig noqday koox dhan kadib markii uu ku soo laabtay kooxda Vigo isaga oo soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah kana mid ah xiddigaha 5-ta ah ee ugu goolasha badan horyaalka La Liga xilli ciyaareedkii hore xiddig ayaa dhaawac ku seegay muddo saddex bilood ah laakiin si cajiib ah ugu laabtay qaab ciyaareedkiisa isaga oo dhaliyay 16 gool.
Heshiis Dhaw: Liverpool Oo Ku Dhaw Saxiixeedii Ugu Horeeyay & Wakhtiga Uu Caafimaadka U Mari Doono Oo La Ogaaday
Barcelona Oo Dagsatay Qorshe Cusub Oo Ay Matthijs de Ligt Ku Helaysa Xagaagan
Wakhtiga Ay Barcelona Dhamaystiri Doonto Saxiixa Antoine Griezmann Oo La Ogaaday.